I-Winterville Cottage - I-Airbnb
Winterville, North Carolina, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Maegan
U-Maegan Ungumbungazi ovelele
Isikhala siyisilungisi esithandekayo esiqhubekayo. Ikhaya lidala ngakho-ke ama-quirks asekhaya amadala kufanele alindelwe. Ingxenye yendlu ivaliwe njengoba sisalungisa ukuze umqashi asale nalokho okulingana nefulethi elisebenza kahle.
Ikotishi lilungele ochwepheshe abahambayo noma omunye umuntu ovakashela indawo yaseGreenville. Inegumbi elikhulu lokulala elikhulu elinendawo eningi yokuqaqa, igumbi lokuhlala linesofa elithokomele kanye ne-tv elayishiwe futhi elungele ukulala nge-netflix.
Sicela uqaphele: sicela ufunde lonke uhlu ngaphambi kokubhukha.
Indawo yethu iyindlu encane futhi ethokomele yama-cinder block yango-1950 elungiswayo njengamanje. Umsebenzi omningi wangaphakathi usuphelile, kodwa sisenokulungiswa kwamakamelo amabili nangaphandle.
Sithemba ukuthi uzothola konke okudingayo: Ikhishi elinefenisha elikwazi ukufinyelela isitofu, isiqandisi esigcwele usayizi, kanye nebha yekhofi. Indawo yokuhlala inombhede othokomele one-roku tv lapho ungaphumuza khona futhi uphumule. Igumbi lokulala elikhulu linombhede olingana nendlovukazi onemicamelo eminingi kanye nekhabethe elikhulu lokungena. Indlu yokugezela enefenisha ihlanganisa ubhavu wokufaka amanzi okugeza oneshawa.
Lesi sikhala sihlanganisa negceke elikhulu elinezihlahla zezithelo namantongomane, nendawo eningi yokuzulazula.
Sicela uqaphele: Lesi yindlu engaphezulu yesilungisi endala. Uma ulindele i-Hilton sicela ubhukhe ubusuku e-Hilton. :)
4.68 out of 5 stars from 144 reviews
4.68 · 144 okushiwo abanye
IWinterville iyidolobha eliphephe kakhulu futhi elinobungani bomndeni. Zizwe ukhululekile ukugibela ibhayisikili, hamba ugijima noma uhlole!
Kukhona isitolo sekhofi sendawo esimangalisayo phezulu nje komgwaqo, i-Biscuit kanye neBean. I-Sam Jones BBQ iyimizuzu emi-5 yokushayela. Uma ungakaze ube-kufanele uhambe!
U-Eric no-Maegan bawumlayezo nje osheshayo noma ushaye ucingo. Indlela elula yokufinyelela kubo ngohlelo lokusebenza lwe-airbnb. Ngale ndlela bobabili bayaziswa nganoma yimiphi imibuzo noma ukukhathazeka.
UMaegan Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Winterville namaphethelo